Governemanta voalohany tarihan’i jeneraly Jean Ravelonarivo - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Minisitra vehivavy enina no nahazo toerana, nisongadina tamin’izy ireo kosa ny fahitan’ny olona ny minisitry ny sôsialim-bahoaka Realy Onitiana.
Governemanta faharoa ato anatin’ny Repoblika fahefatra sahady ity najoro izay tarihan’i jeneraly Jean Ravelonarivo ity. Voalohany ho an’ity jeneraly vaovao, no sambany minisitra ary avy hatrany dia Praiminisitra.
Nihena kely ary nisy nahafanina
Nihena lasa telopolo ny isan’ireo minisitra raha toa ka roa amby telopolo izany teo aloha ka ny enina amin’izy ireo dia vehivavy. Roa amby roam-polo kosa no tafajanona saingy misy ny niova toerana fotsiny, izany hoe 18 nijanona teo amin’ny toerany ary efatra nifindra lasy. Valo no olom-baovao.
Samy nanana ny tao an-tsainy ny tsirairay nanoloana io rafitra vao napetraka eto amin’ny firenena io. Anisan’ny nahavalalàna ny daholobe ny nanendrena an’i Onitiana Realy ho minisitry ny mponina sy ny sôsialim-bahoaka. Tsy nanam-po velively ny besinimaro hoe, ho tonga olona ambony ilay mpanao “Invité du Zoma”n’ny TVPlus. Mpanao gazety manana ny lazany i Onitiana ary niezaka nivoy sy nitrandraka ny tontolon’ny mpanao politika, indrindra fa hatramin’ny krizy 2009. “Tetika nataony hahazoana seza ilay fandaharana invité de zoma tao amin’ny fahitalavitra anasainy an’ireo politikalahy”, hoy ny fanehoan-kevitr’ity rangahy iray ity raha nanontaniana mikasika an’i Realy Onitiana. Sarotra ny miantsoroka ny fampivoarana ny lafiny ara-tsôsialy, kanefa rehefa ao tokoa izay fitiavana ny mpiray tanindrazana izay, dia betsaka ny finiavana ary tsy hitarain-tana-miempaka ny fampandrosoana. Ny vahoakan’Antsirabe manokana, efa mangetaheta fiovana, tsikaritra tamin’ny valin-tenin’izay nanontaniana fa mitsipozipozy anaty fahantrana lalina ny ankabeazan’ny Malagasy ary mipàka any an-tsoso-koditra ny ngidiny. Efa irosoana izao ny fampihavanam-pirenena, tafatsangana ny paikady sy ny fifandaminana vaovao ka ny fandrosoana sisa andrasana ary andrandraina ho laharam-pamehana.
Hentitra ny fanamby
Mbola lavitra ny aleha, kanefa nasehon’i Praiminisitra Jean Ravelonarivo fa : “hiasa, hiasa ary hiasa hatrany”. Ho matotra ny asa hatao, ary samy vonona daholo na ny an-daniny na ny an-kilany, raha ny kabarin’Andriamatoa filohampirenena Hery Rajaonarimampianina teny Iavoloha. Nahatofoka ny vahoaka rahateo ny fiainam-pirenena goragora tao anatin’izay fotoanan’ny krizy lavareny izay, satria tsy tambo isaina ny zava-tsarotra nifamahofaho sy ny adilahy politika nanakorontan-tsaina. Handia sehatra goavana ireto mafana fo ireto amin’ny fanarenana ny fiainam-bahoaka, ka omena fitantanana sy andraikitra na ny lahy na ny vavy. Mila mifofotra ihany koa ny tsirairay fa tsy mitavana ny sasany sy miandry toloram-potsiny. Hiverina amin’ny laoniny sy hihavao i Gasikara raha mandray ny adidy aman’andraikitra tandrify azy ny olom-pirenena isan-tokony. Ny fanamby mahitsy, atao an-tsirapo no azo ilazana fa hampahomby ny asa harafitra sy ho tontosaina an-tsakany sy an-davany, fa tsy ho kobaka am-bava mampanantena poakaty ka hamoa-tsampona eo indray. Miainga avy any amin’ny Minisiteran’ny mponina sy ny fiahiana ara-tsôsialy ny dingana voalohany hatrehana amin’izany. Herintaona sy efatra andro katroka moa izao ny nandraisan’ny Filoha Rajaonarimampianina ny fanalahidy teny Mahamasina, fa mbola tsy voavaha tanatin’ny taona 2014 ny vavahady ahafahana miditra amin’ny fandrosoana. Toa tsy tazana teny ho eny ilay ambetin-teniny manindrahindra ny tombon-tsoa ambonin’ny vahoaka. Irina hampitraka an’i Madagasikara indray ny fanoloana ireo mpanatanteraka, governemanta entin’i Jean Ravelonarivo.